सनुप पौडेलको स्वरमा ‘जुगौं जुग’ (भिडियो)
गीतकार डा. डीआर उपाध्याय ‘जुगौं जुग’ भन्दै दर्शक माझ आएका छन् । उनी एकपटक सात एल्बम स्रोतामाझ ल्याएर चर्चामा आएका हुन् । सनुप पौडेलको स्वर, सागर अधिकारी ‘शरद’को सङ्गीत रहेको ‘जुगौं जुग जूनताराकी सहेली तिमी...’ गीतको भिडियो लिएर स्रोतारदर्शकमाझ डीआर आएका हुन् ।
डीआरको ‘सहेली’ एल्बममा रहेको यो गीत अनुसारको भिडियो पनि निर्माण भएको छ । भिडियो निकै तामझामका साथ निर्माण भएको छ । बसन्त सापकोटाको निर्देशन रहेको गीतको भिडियोमा डा. उपाध्याय आफैँ र रिचा थापा फिचरिङ छन् । अर्जुन सापकोटाले खिचेको गीतको भिडियोलाई अर्जुन पोखरेलले सम्पादन गरेका हुन् ।
साहित्यकार तथा गीतकार डी.आर. उपाध्यायले केही समयअघि नेपाली एल्बम प्रकाशनमा एकैपटक सबैभन्दा धेरै एल्बम निकालेर नयाँ रेकर्ड राखेका थिए । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको हातबाट एकैपटक सात एल्बम बिमोचन गरिएको थियो । उनका एक उपन्यास ‘दगाबाज’सहित एल्बम ‘जखम’, ‘माउन्टेन मेलोडी’, ‘नसालु नजर’, ‘जोहो’, ‘अन्तराप’, ‘प्रतिनाद’ र ‘सहेली’ विमोचन गरिएको थियो ।
देशको सातै प्रदेशमा ‘प्रतिनाद साङ्गीतिक यात्रा’ गर्न लागेका डीआरले यसको सुरुवात पूर्वबाट गरिसकेका छन् । पूर्वको यात्रामा डा. डीआर उपाध्याय, गीतकार सुरेश घिमिरे ‘निश्चिन्त’, गायिका निशा देशार, सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठ, सागर अधिकारी ‘शरद’लगायतका थिए ।उपाध्यायका यसअघि ‘अतिरिक्त’, ‘भाग्यचक्र’, ‘स्वार्थी’, ‘त्यागी’, ‘वज्राधात’, ‘अपवित्र छायाँ’ र ‘बिटुली’ जस्ता उपन्यास पाठकमाझ आइसकेका छन् भने गीत एल्बम ‘प्रणय’ उनको पहिलो एल्बम हो ।